Sudan oo dalkeeda ka Mamnuucday Khudaarta iyo Caanaha laga keeno dal Carbeed – Balcad.com Teyteyleey
Dowlada Sudan ayaa shaaca ka qaaday in dalkeeda laga mamnuucay Caanaha ,Khudaarta iyo alaabaha kale ee laga keeno dalka ay dariska yihiin ee Masar, waxa ayna tilaabadan sii xoojisay xariirkii xumaa ee horey labadan dowladood uga dhaxeeyay.
Shirkadaha laga leeyahay dalka Sudan ee Caanaha, Khudaarta iyo laabaha kale ka keeni jiray dalka Masar ayaa lagu war galiyay in la mamnuucay, waxaana la faray in adeegyadaasi ay si toos ah uga keensadaan wadamo kale aan Masar aheyn.
Dowlada Sudan wali faah faahin dheeraad ah kama aysan bixin sababta keentay in la mamnuuco Khudaarta iyo Caanaha laga keeni jiray dalka Masar, waxaana tilaabadan lagu mamnuucay caanaha iyo khudaarta Masar si weyn looga daremay dalka Sudan.
Khudaarta ugu badan, Caanaha, iyo xoolaha ayaa inta badan dalka Sudan waxa looga kenaa dalka Masar, waxaana si weyn looga dareemay Suuqyada dalka Sudan saameynta uu durba keenay amarkan kasoo baxay dowlada Sudan.
Dowlada Sudan ayaa lagu soo waramayaa in tilaabadan u qaaday caro ay ka qaaday canshuur kordhin lagu sameeyay shirkadaha laga leeyahay dalka Sudan, waxa ay sidoo kale ka careysan tahay Masar fiisooyinka dal ku galka Masar oo lagu adkeeyay dadka u dhashay Sudan.
The post Sudan oo dalkeeda ka Mamnuucday Khudaarta iyo Caanaha laga keeno dal Carbeed appeared first on Ilwareed Online.
80 Qofood oo Ku Dhintay Qarax Ka Dhacay Magaalada Kabul+Sawirro